Mpanamboatra sy mpamatsy rohy manara-maso - Factory Track Link China
Amin'ny fampiasana akora voalohany mpamatsy kilasy indostrialy dia mampiditra haitao mafana mamorona fananganana teknolojia ny rohy mpiambina mba hiantohana ny fahamendrehana dimensional sy ny fanitsiana voamadinika.
Bonovo dia mamatsy ny fivorian'ny rohy mahazatra, ny rojo misy tombo-kase ary nohosorana ho an'ny mpitsongo sy mpanao bulldozer, ny làlan'ny rohy manomboka amin'ny 90mm ka hatramin'ny 317mm. Nampiasainay ny fitsaboana hafanana ambony mba hiantohana ny hamafin'ny rohy mandeha, ny tsimatra sy ny kirihitr'ala dia notsaboina hafanana tamin'ny alàlan'ny famonoana avo lenta ihany koa mba hahazoana antoka fa mandritra ny androm-piainana dia mitafy mafy.
I Bonovo dia mamatsy ny fivorian'ny rohy mahazatra, ireo kojakoja izay mifandray amin'ny tany ary ampiasaina amin'ny fivezivezin'ny masinina. Izany dia mitaky sehatra matanjaka be an'ny kiraro an-dalambe sy lalao mifanentana amin'ny bolt. afaka manome maodely isan-karazany izahay. Azontsika atao ihany koa ny manao santionany miorina amin'ny filanao mba hitsapana ny vokatray.
Bonovo dia mamatsy ny fivorian'ny rohy mahazatra, Afaka manome anao ny faritra samihafa amin'ny fitrandrahana fiara ho an'ny ankamaroan'ny mpamaky marika sy milina fanday hafa. Miaraka amin'ny mpiasa traikefa efa mihoatra ny folo taona milofo ho amin'ny fahalavorariana amin'ny dingana rehetra, Bonovo dia manome hatrany ny habetsaky ny faritra misy kitrotro mafy miaraka amin'ny fahombiazan'ny vidiny tsara indrindra manerantany.
Ny tanany pin dia mampiasa fitsaboana fanamafisam-peo coaxial anatiny hanatsarana ny fanoherana ny akanjo ambony sy ny fihenan'ny fiantraikany lehibe.
Ity no vokatray malaza amin'ny salety.
Ny sehatr'asanay momba ny andiam-panamoriana ambanin'ny tany dia ny faritra fanampiny izay mifandray amin'ny tany ary ampiasaina amin'ny fihetsiky ny masinina.